Muuri News Network » Xero ciidan loogu magacdaray General Dhagabadan oo (Sawirro)
Xero ciidan loogu magacdaray General Dhagabadan oo (Sawirro)
Nov 19, 2015 - Comments off
Waxaa maanta magaalada muqdisho kuwada kulmay Taliyaha ciidanka XDS S/gaas Maxamed Aasan Axmed.
Kulanka ayaa waxa uu ka dhacay dhismaha wasaaradda Gaashaandhigga waxa uuna ahaa mid lagu xoojinaayay Xiriirka Saraakiisha Wasaarada iyo qaabkii lagu sii xoojin lahaa howlaha ay wasaaradu ku dardar galineyso amaanka Dalka.
Taliyaha ciidanka XDS S/gaas Maxamed Aasan Axmed, ayaa la kulankiisa Saraakiisha xooga ku saaray habka ay u socdaan howlgallada ciidamadu ay ka wadaan qeybo ka mid ah gobollada dalka.
Kulanka ayaa waxaa khudbado kala duwan ka jeediyay Taliyaha, Saraakiisha iyo marti sharaf kale waxa ayna saraakiisha kula dardaarmeen iney gutaan wajibaadka qaranka islamarkaana ay ka shaqeeyaan nidaaminta ciidanka ilaaliyaana xuquuqda ciidamada iyo dishabiliinkoodaba.
Taliyaha waxa uu kulanka kaga dhawaaqay in dugsiga tababarka ciidamada Jasiira loogu magic daray Abaanduulihii hore ee ciidanka XDS Jeneraal C/kariin Yuusuf Aadan “Dhegabadan’ wuxuuna saraakiisha faray inta magaca dugsiga Jasiira lagu bedelay sidan “Dugsiga tababarka ciidamada ee Jeneraal C/kariin Yuusuf Aadan Dhegabadan”.